पर्यटन र प्रकृतिमा खुलिन् ‘सुन्दरी’हरु | .:: Welcome || Paryatannews
Home » अर्थ » पर्यटन र प्रकृतिमा खुलिन् ‘सुन्दरी’हरु
पर्यटन र प्रकृतिमा खुलिन् ‘सुन्दरी’हरु
चितवन । पोखराकी २२ वर्षीया प्रतिभा दवाडी पहिलोपटक चितवन निकुञ्जमा आइन् । उनलाई मिस नेपाल आयोजना गर्दै आएको हिडन ट्रेजरले निकुञ्ज घुमाउन ल्याएको हो । उनी मिस नेपाल २०१६ की प्रतिस्पर्धी हुन् ।
“सुनेको भए पनि पहिलोपटक सौराहा आएको, साह्रै रमाइलो लाग्यो,” प्रतिभाले भनिन् – “प्रकृतिसँग साक्षात्कार गर्दैछु ।” यसरी घुम्दा प्रकृतिसँग नजिक हुने र संरक्षणका गतिविधि आँखाले नियाल्न पाइने बताएकी उनलै आफूले पछि संरक्षण अभियानमा योगदान दिने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनीसँग सङ्खुवासभाकी सिर्जना रेग्मी पनि छिन् । थाइल्यान्डमा भएको मिस ग्राण्डीमा शीर्ष ३० मा पुग्न सफल उनी पनि सौराहा आसपासमा अहिले प्रकृति र वन्यजन्तुसँग रमाइरहेकी छिन् ।
“म मिस नेपाल जितौँ या नजितौँ, यो अनुभवले मलाई पावर दिन्छ,” उनले खुलेरै भनिन् । पहेँलो वस्त्रमा उनीहरु सजिएका छन् । मिस नेपालले हरेक क्षेत्रमा काम गर्न सहयोग मिल्ने विश्वास उनको छ । “सुन्दरी र संरक्षणबीच सुन्दर रिलेसन छ,” उनले भनिन् –सुन्दरीले बोलेका कुराले समाजमा निक्कै प्रभाव पार्ने भएकाले संरक्षणमा चेतना जगाउँछ ।”
यसले मानिसलाई वातावरण मैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने ठम्याइ उनको छ । नं ७ की २० वर्षीया रोशनी खत्री र काठमाडाँैकी २३ वर्षकी कृतिमा रिमाल आइटी र कानुन पढ्दै छन् । उनीहरु फरकफरक विधामा विद्यार्थी भए पनि मिस नेपालमा आकर्षित भए । आफूले आफूलाई उजिल्याउन यसले मञ्च दिने कृतिमाको भनाइ छ ।
न्याय नपाएकालाई सहयोग गर्ने र कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिन आफू सक्रिय हुने उनले बताइन् । अर्की वातावरण विज्ञान पढ्दै गरेकी वर्षा लेखी वर्षले २२ टेकिन् । आफ्नो ‘फिल्ड’ भएकाले मिस नेपाल घोषित भएको खण्डमा संरक्षणमा लाग्ने उनको अठोट छ । “म मिस नेपाल भएँ भने मध्यवर्ती क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि योगदान दिन्छु,” उनले भनिन् – “मलाई मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व ठूलो छ भन्ने थाहा छ । त्यो न्यून गर्न लाग्छु ।” नभए पनि संरक्षणमा लाग्ने योजना बनाएकी उनले सौराहा र निकुञ्ज घुम्दा प्राकृतिक सौन्दर्य बुझ्न सहयोग मिलेको अनुभव सुनाइन् ।
अहिले हिडन ट्रेजरले उनीहरुलाई कार्यक्षेत्रमै लगेर अनुभव सिकाउँदै प्रशिक्षण दिइरहेको छ । अठार जना प्रतिस्पर्धी संरक्षण गतिविधि र वन्यजन्तुसँग साक्षात्कार गर्न तीनदिने सौराहा र निकुञ्ज भ्रमणमा छन् । उक्त प्रशिक्षणकी संयोजक शुभेच्छा खड्काका अनुसार संरक्षण गतिविधिबारे जानकारी दिन र नजिकबाट प्रकृतिसँग घुलमिल गराउन सहभागीलाई निकुञ्ज ल्याइएको हो ।
उनीहरुलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सहयोगमा यहाँ ल्याइएको हो । कोषका चितवन प्रमुख डा चिरञ्जीवी पोखरेल सुन्दरीमार्फत संरक्षण कार्य र चेतना दिन र विदेशमा सन्देश पु¥याउन मद्दत गर्ने भएकाले विगत तीन वर्षदेखि यस्तो कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए । हात्ती सफारी गराएरै सहभागीहरुलाई प्रकृतिसँग नजिक बनाइदिएको उनको भनाइ छ ।
उनीहरुसँग यसअघिकी मिस नेपाल इभाना मानन्धर पनि छिन् । मिस नेपाल बन्ने बित्तिकै प्राकृतिक दूत बन्ने भएकाले चेतना फैलाउन उपयुक्त माध्यम हुने उनले बताइन् । मान्छे र प्राकृतिक सौन्दर्यबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको उनको अनुभव छ ।
पर्यटन र प्रकृतिमा खुलिन् ‘सुन्दरी’हरु Reviewed by Shiva Shrestha on Mar 20 . चितवन । पोखराकी २२ वर्षीया प्रतिभा दवाडी पहिलोपटक चितवन निकुञ्जमा आइन् । उनलाई मिस नेपाल आयोजना गर्दै आएको हिडन ट्रेजरले निकुञ्ज घुमाउन ल्याएको हो । उनी मिस नेप चितवन । पोखराकी २२ वर्षीया प्रतिभा दवाडी पहिलोपटक चितवन निकुञ्जमा आइन् । उनलाई मिस नेपाल आयोजना गर्दै आएको हिडन ट्रेजरले निकुञ्ज घुमाउन ल्याएको हो । उनी मिस नेप Rating: 0